Bepanhau re Daily News Rinodzoka Munyika
Kurume 18, 2011
Bepanhau re Daily News, iro rakavharwa nechisimba nehurumende muna 2003, ranga riri mumigwagwa neChishanu umo ranga richitengeswa.
Bepanhau iri riri kutarisirwa kutanga kudhindwa mazuva ose neChishanu chinotevera, sezvo ratengeswa neChishanu ranga riri renzwisa chete.
Mupepeti webepanhau iri, Va John Gambanga, vanoti vari kufara zvikuru nekuti vatanga zvakare kudhinda bepanhau iri mushure mamakore masere kubva zvarakamiswa nevaive gurukota rezvekuburitswa kwemashoko munguva iyi, Va Jonathan Moyo, vachishandisa mutemo we Access to Information and Protection of Privacy Act, kana kuti AIPPA kuti vadhinde bepanhau raive nemukurumbira iri.
Daily News, iro raindindwa nekambani ye Associated Newspapers of Zimbabwe, rakavharwa pamwe chete nerimwe raro bepanhau re Daily News on Sunday.
Mamwe mapepanhau akavharwa nechisimba anosanganisira The Tribune, The Weekly Times nemamwe. Kambani ye Associated Newspapers of Zimbabwe yakapihwa rezenisi rekudhinda Daily News gore rapera neZimbabwe Media Commission.
Chipangamazano munyaya dzekutorwa nekuburitswa kwenhau, Va Eric Matingo, avo vanoshanda ne Media Monitoring Project Zimbabwe, vanoti vanofara nekutanga kudhindwa kwaitwa Daily News, kunyange hazvo vasiri kufara nenyaya yekuti mutemo we AIPPA uchiripo.
Hurukuro naVa John Gambanga
Hurukuro naVa Eric Matingo